10 | juin | 2010 | GAZETY_ADALADALA
DTS Moov – ADSL – marina ve izany?
Posted on 10/06/2010 by gazetyavylavitra
Efa fotoana ela no niarahako tamin’ny tolotra MOOV First (alina sy faran’ny herinandro tany am-boalohany – Soirée Week-end). Ary noho izay faharetana sy fahitan-dry zareo fa hoe isan’ny mpanjifa nahafa-po azy izay ny tena, dia nomeny tolotra vaovao mampiasa ADSL tsy misy fetra (ADSL Illimité 24h/24h 7j/7j).
Fampitahana ireo karazana tolotra
CDMA no nampiasaiko tany aloha (020 26 XXX XX), ilay mampiasa karatra kikisana, sy poste telephonique misy antenne kely ireny, talohan’ny nampiasana ilay ‘Soirée Week-end’ sy nifindràna tamin’ilay tolotra farany nomena ahy.
Raha oharina tamin’ilay CDMA dia mba nahafa-po tokoa ilay Soirée Week-end fa aina no matezà hiari-tory isaky ny misy zavatra lehibebe atao. Ny naha-samihafy ilay tolotra farany (illimité) tamin’io S/WE io indray dia izy azo ampiasaina amin’ny fotoana rehetra (izay ora tianao hidirana). Toa mba nety ihany ny resaka ‘vitesse’ teo ampiandohana. Saingy nony tato aoriana kely dia nampanontany tena (na nampiteny ny moana mihitsy) ny filonan’ilay tolotra.
Fa hatao inona moa izy ity?
Raha fitaovana hifandraisana sy hifanakalozana amin’ireo vondron’olona miara-miasa amin’ny tena maneran-tany no nampiasàna azy io tany amboalohany tany dia niampy ny fanaovan’ny ankizy fikarohana momba ny fianarany sy ny lesony, ary miampy ny haitraitra kely isan-karazany tato aoriana.
Eo amin’ilay lafiny fifandraisana amin’ny mpiara-miasa mihitsy no lasa olana ankehitriny satria SADY MILONA BE NO TAPAKA LAVA ilay tolotra amin’izao fotoana izao. Tsy mipetraka 24 ora amin’ny 24 ora eo ampototry ny solosaina ny tena, fa isak’izay mila sy misy zavatra maika hatao no miditra eo. Akory anefa ny fahasorenanao rehefa iny ianao maka ‘fichier’ be hadiry iny, na ianao ilay mandefa iny, no tapaka ny fifandraisana (connexion). Tsy voatery hànana ilay antsoina hoe ‘fonction reprise’ anefa ny tranonkala ifandraisana, na ny rindrambaiko ampiasain’ilay mifandray aminao. Dia mazava ho azy fa miverina maka, na mandefa azy indray hatrany amin’ny voalohany no sazy mavesatra miandry anao. Izany rehetra izany anefa dia midika sahady, midika foana, fahaverezam-potoana, ary indrindra fahaverezam-bola ho ahy mpanjifa (satria ny sandan’ilay tolotra dia miala foana any amin’ny kaontiko any amin’ny banky -prélèvement automatique). Ka asa raha mba tokony hosandaina koa ny fahasorenana sy ny fotoana very toy izany?
Rehefa natao àry ny fitarainana dia namaly soamantsara ny hafatra nalefa ho azy ny FAI. Nomena laharana hatrany ireo fitarainana nataoko. Nisy ny fifampiresahana an-telefaona nifanaovana tamin’ireo mpisahana ny mpanjifa (na andro na alina) sy tamin’ny teknisiana avy amin’ny mpanolotra (FAI). Noahiahian’izy ireo ho ny solosaina no nisy olana. Fepetra noraisiko àry ny hampanao fizahana ny solosaiko ka niantso teknisiana hanao izany. Tsy nisy ny olana hita.
Rehefa ela nifampiantsoana sy nifampitadiavana teny ny roa tonta dia tonga kosa ny TELMA nanao famindràna ny tariby teny amin’ny andry voatokana ho amin’izany. Naàto araka izany ny fifandraisana tao an-trano mandra-pahavitan’ilay famindràna. Rehefa vita izany dia niverina ny fifandraisana. Mazava ho azy fa tsy hijanona eo amiko mandritry ny ora maro ireo mpiasa mba hanamarina ny fahatapahana mateti-pitranga fa rehefa hitany fa tafiditra amin’ny tranonkala ianao, dia mandeha izany ny Net ao aminao. Dia lasa izy nony vita ny anjarany. Tsy mbola nahavaha ny olan’ny fahatapatapahana sy ny filonan’ny fifandraisana anefa izany firotsahan’ny TELMA an-tsehatra izany.
Nisy fotoana indray niantso ny mpisahana ny mpanjifa Moov aho (andro hafa ary andro alina io) nanazava ny amin’io olako io. Nandritra ny firesahana dia tapaka indray ny fifandraisana (Net), ka teo noho eo ihany dia nilazako ny amin’izay izy. Nomarihany tamin’io fotoana niresahanay io fa tratran’ny encombrement ny ‘ligne ampiasaiko’ ka hovahàn-dry zareo avy any. Dia niverina tafiditra tokoa indray.
Nisy fotoana mbola niantso indray aho (andro hafa koa ary andro alina io). Ary dia mbola tapaka teo ampiresahana teo koa ilay Net. Ny nahagaga dia ny nilazàna tamiko fa hoe ‘tsy tracé’ aty aminay (Moov) izany fahatapahana lazainao izany, fa ‘connexion 2h sans interruption no hitako ato’ hoy ilay nandray ny antsoko.
Rehefa tsy hita àry izay fototry ny olana dia voatery nijery ifotony ny solosaiko aho, izay niafara tamin’ny fanaovana ‘formatage’ mihitsy sao hoa ny fichiers systèmes no misy voadona. Dia naverina indray ny fifandraisana (Net) tao aorian’izay, saingy tsy nivaha hatrany ny olana amin’ny fahatapatapahana sy filonana (lenteur).
Napetraka tamiko indray ny fanontaniana sao solosaina maromaro no miaraka miasa. Tsia no valiny satria solosaina iray ihany no miasa amin’io ao an-tokantrano.
Farany dia nasaina nentiko tany ny Modem mba hatao fitiliana fa tsy nahitàana olana koa. Ny techicien avy ao ihany anefa no nilaza tamiko ny ampitson’izay fa tsy ampy hanaovana fitiliana modem raha izay minitra vitsy na ora iray.
Ankoatra izay dia nolazain’ilay nandray ahy teny Andraharo koa fa izany MG4 izany sy ny satelita no fototry ny olana. Oadray zalahy! Lazao izay marina e!
Manoatra noho ireny ‘connexion’ any amin’ny ‘cyber-café’ ireny, izay tsy maintsy iandrasana minitra vitsy isaky ny hanokatra pejy. Raha any mantsy dia azoko eritreretina ihany ny hoe ‘saturée’ ny bande passante satria hifampitsinjaràn’ny solosaina marobe, na koa hoe tsy dia sécurisée ny ligne ka miovaova arakaraky ny isan’ny mpitsidika sy ny takelaka tsidihana ny fisosàna (fluidité).
Misy fitarainana nalefako indray any (andro vitsy lasa izay) ka dia ho hita eo izay valiny sy ho fihatsaran’ny tolotra. Nosoratana any daholo hatramin’ny andro sy ora nitrangan’ireo fahatapahana tsy fantatra antony rehetra tao anatin’ny efa ho tapa-bolana.
Fifanarahana 2 taona vaovao no nifanaovako tamin’ny DTS Moov mifanaraka amin’io tolotra ADSL io izay tokony hifarana ny faran’ny taona 2011, nefa toa mahalasa saina ihany ny amin’ny tokony hitohizana na tokony hanatsaharana ilay fifanarahana, raha ny zavatra iainako hatreto no jerena!
Ka efa tena ADSL tokoa ary ve ity atolotra ny mpanjifa eto Madagasikara ity sa …?
Filed under: anao ny fitenenana, aterineto, haitao, tapatapany | Tagged: ADSL, DTS, Madagasikara, Moov, TELMA |	1 Comment »